Lynda.com မှ Tutorials movie များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ဒီ Topic ဆိုက်လေးကိုတော့ ကျွန်တော် အစ်ကိုရဲအောင်ကို အသိပေးပြီးမှ လုပ်ထားလိုက်တာပါ . ဘယ် ဖိုရမ်မှာမှ မရှိသေးတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး . ကျွန်တော် ဒီ Topic လေးမှာ Lynda ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ Tutorial movies များကို တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ကို http://edwardschopler.com/ ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Eddie Schopler ရဲ့ အကောင့်ပါ . Lynda.com မှာ အခြေခံမှစပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ creating တွေအထိ အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ် . ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်းချင်း တင်သွားပေးပါ့မယ် . အားလုံးဟာ Movie တွေဖြစ်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ် .
Link တွေကိုတော့ ကျွန်တော် ၃ နေရာကနေ တင်ပေးသွားမှာပါ
Last edited by ညီနေမင်း; 05-10-2009 at 06:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီး, လမ်းပြကြယ်, ကျော်ထက်ချိန်, အောင်ကျော်ဆန်း, ဝေယံ, မြင့်မိုရ်, decemberdec, pannuko, Ye Aung, zo
ကဲ joomla နဲ့ Website လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . CD တစ်ချပ်စာပါ ..
Last edited by ညီနေမင်း; 06-10-2009 at 12:59 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီး, အေးဝတ်မှုန်, ဝေယံ, openeyes, Ye Aung, zo
စစ်တွေသားချေ, တီး, ဖြိုးယံလေး, Ye Aung, zo
Last edited by ညီနေမင်း; 06-10-2009 at 11:48 AM..
တီး, openeyes, Ye Aung, zo
16-10-2009, 10:38 AM
Adobe Photoshop Elements 8 for Mac Essential Training
Lynda com Adobe Photoshop Elements 8 for Mac Essential Training-iNKiSO
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 16-10-2009 at 10:41 AM.. Reason: စာလုံးကြီး
လင်းထိန်, tu tu, zo